Amphora ထုတ်ကုန်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း 2022 - shopgiejo.com
အကယ်၍ သင်သည် ပြောင်မြောက်ပြီး စတိုင်ကျသော CBD vape kits သို့မဟုတ် အရည်အသွေးမြင့် CBD vape ဆီများကို ရှာဖွေနေပါက၊ သင်စဉ်းစားသင့်သည် Amphora.
Amphora သည် သဘာဝအတိုင်း နှင့် THC ကင်းစင်သော ပရီမီယံ CBD ထုတ်ကုန်များပါရှိသော ဗြိတိန်ကျန်းမာရေးအမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဖိစီးမှု၊ အိပ်စက်ခြင်း၊ နာကျင်ကိုက်ခဲမှုနှင့် ကုန်ထုတ်စွမ်းအားကို ကူညီပေးရန်အတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့် vape kit များသည် စားသုံးသူများ၏ ကျန်းမာရေးပန်းတိုင်များကို လျှော်ပင်၏စွမ်းအားကို အသုံးချခြင်းဖြင့် စားသုံးသူများ၏ ကျန်းမာရေးပန်းတိုင်များဆီသို့ အရောက်လှမ်းနိုင်ရန် ကူညီပေးပါသည်။
Amphora သည် ၎င်း၏ vape အချို့ကို စမ်းသပ်စစ်ဆေးရန် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ခဲ့သည်။ နောက်ပြီး ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော့်ရဲ့ ရိုးရိုးသားသား သဘောထားကိုလည်း ဖတ်ကြည့်ပါ။
Amphora သည် လက်တွေ့ကျသော၊ လိုက်လျောညီထွေရှိပြီး နားလည်လွယ်စေရန်အတွက် တည်ထောင်ထားပါသည်။ CBD vape များ။ အမှတ်တံဆိပ်ကို စူးစမ်းလေ့လာပြီးနောက်၊ ထုတ်ကုန်၏အရည်အသွေးကို ချီးမွမ်းကြသည့် ထင်ရှားသောစာပေများစွာတွင် ၎င်းကိုပြသထားသည်ကို တွေ့ရှိခဲ့ရသောကြောင့် vapes များကို စမ်းသုံးကြည့်ရန် ပိုမိုစိတ်အားထက်သန်ခဲ့သည်။
ကုမ္ပဏီ၏ယုံကြည်ချက်များသည် ၎င်း၏အမည်တွင်ပါရှိသည် — Amphora သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ကုန်ပစ္စည်းများသယ်ယူပို့ဆောင်ရန်အတွက် ရှေးခေတ်ယဉ်ကျေးမှုများအသုံးပြုသည့် ကွန်တိန်နာဖြစ်ပြီး မတူညီသောယဉ်ကျေးမှုများကို ချိတ်ဆက်ပေးသည်။ Amphora သည် လူများအား ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် အကောင်းဆုံးပုံစံဖြင့် နေထိုင်နိုင်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော ထုတ်ကုန်များ၏ ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုကို ယုံကြည်သော ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။
Vapes နှင့် vape ဆက်စပ်ပစ္စည်းများသည် Amphora တွင် အထူးပြုထားသည့်အရာဖြစ်သည်။ အမှတ်တံဆိပ်သည် အရည်အသွေးမြင့်စံချိန်စံညွှန်းများကို ထိန်းသိမ်းခြင်းအတွက် ဂုဏ်ယူပါသည်။ အဆိုပါ vapes များကို အော်ဂဲနစ် လျှော်ပင်မှ အရင်းခံသော CBD ပေါင်းခံမှ ပြုလုပ်ထားသည်။
အားလုံး CBD မွမ်းမံမှုများ နှင့် လှည်းများကို သန့်ရှင်းမှု၊ အရည်အသွေးနှင့် CBD အစွမ်းသတ္တိရှိစေရန်အတွက် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း အဆောက်အအုံများတွင် စမ်းသပ်ထားသည်။ Amphora ဝဘ်ဆိုဒ်တွင် ဓာတ်ခွဲခန်းရလဒ်များကို အလွယ်တကူ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင်၊ ထုပ်ပိုးမှုတစ်ခုစီတွင် သင်စကင်န်ဖတ်နိုင်သော၊ အတွဲနံပါတ် သို့မဟုတ် ထုတ်လုပ်သူ၏ရက်စွဲကို အသုံးပြုကာ စမ်းသပ်မှုရလဒ်များကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည့် QR ကုဒ်တစ်ခုပါရှိသည်။
Amphora သည် UK နှင့် EU သို့ ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။ Amphora သင်္ဘောများကို တတ်နိုင်သမျှ အမြန်ဆုံး မှာကြားပေးပါသည် ။ ဆိုလိုသည်မှာ သင်သည် နေ့လည်2နာရီ (GMT) မတိုင်မီ မှာယူပါက ၎င်းကို ထိုနေ့တွင် ပို့ဆောင်မည်ဖြစ်သည်။ နေ့လည်2နာရီ (GMT) ပြီးနောက် မှာယူထားသော အမှာစာများကို နောက်နေ့တွင် လုပ်ဆောင်ပါသည်။ £50 သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပိုသော UK အော်ဒါများအတွက် ပို့ဆောင်ခ အခမဲ့ဖြစ်သည်။ ဈေးဝယ်သူ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာလုံခြုံမှုကို အာမခံချက်ပေးထားသည့် အမှတ်အသားမပါသော သတိထားထုပ်ပိုးမှုကို နှစ်သက်ကြောင်း ဖော်ပြရပါမည်။
Amphora သည် သုံးစွဲသူများ၏ စိတ်ကျေနပ်မှုကို အာမခံပါသည်။ ထို့ကြောင့် သင့်ဝယ်ယူမှုအား လုံးလုံးမကျေနပ်ပါက၊ ဝယ်ယူသည့်နေ့မှ နှစ်ပတ်အတွင်း ၎င်းကို ပြန်လည်ပေးပို့နိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်၊ သင်သည် ပြန်လည်ပေးပို့ခြင်းအတွက် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်သော အချက်အလက်အားလုံးကို ပေးခြင်းဖြင့် ဖောက်သည်အကူအညီကို ဆက်သွယ်သင့်သည်။ ပြန်အမ်းငွေအပြည့်ရရှိလိုပါက ထုတ်ကုန်များကို ဖွင့်ထားရန် လိုအပ်ပါသည်။
Amphora ၏ CBD vape cartridges အမျိုးအစား လေးမျိုးဖြင့် လာပါသည်။ တစ်ခုစီတွင် ထုတ်ကုန်၏ အကျိုးကျေးဇူးများကို မြှင့်တင်ရန် အရည်အသွေးမြင့် CBD ပါ၀င်သည်။ တွန်းလှည်းများကို 0.3 ml နှင့် 0.7 ml အရွယ်အစားနှစ်မျိုးဖြင့် လာပါသည်။ ၎င်းတို့သည် Amphora Craftsman Pen (အောက်တွင် သုံးသပ်ထားသည်) နှင့် အများဆုံး 510 thread vape pen ကျည်တောင့်များနှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
တွန်းလှည်းများတွင် အသန့်ရှင်းဆုံးပါဝင်ပစ္စည်းများဖြစ်ပြီး ဗီတာမင် E Acetate၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက် glycerine၊ propylene glycol သို့မဟုတ် MCT ဆီ မပါဝင်ပါ။ ၎င်းတို့သည် vegan-friendly၊ သန့်စင်ပြီး၊ နီကိုတင်းနှင့် THC တို့မှ ကင်းစင်ပြီး ကောင်းမွန်ပြည့်စုံသော ကျန်းမာရေး အတွေ့အကြုံကို အာမခံပါသည်။
ထို့အပြင် တွန်းလှည်းများကို ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဆင့် ပလတ်စတစ်ပါးစပ်နှင့် တိုင်ကီနှင့် ကြွေကွိုင်များဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ တွန်းလှည်းများအသုံးပြုပုံ ဒီဇိုင်းနှင့် ရိုးရှင်းမှုတို့ကို ကျွန်ုပ် လုံးဝ စွဲလမ်းပါသည်။
vape တွန်းလှည်းတစ်ခုစီ၏ အကျိုးကျေးဇူးနှင့် သက်ရောက်မှုများကို သိရှိရန် ဆက်လက်ဖတ်ရှုပါ။
အဆိုပါ Amphora မှ vape လှည်းကို တွန်းအားပေးပါ။ အော်ဂဲနစ်လျှော်ပင်မှ 20% CBD ပေါင်းခံပါရှိသည်။ စျေးဝယ်လှည်းသည် အလွန်အစွမ်းထက်သော lilac နှင့် citrus tone ပေါင်းစပ်ထားသည့် အံ့သြဖွယ်အရသာရှိသည်။ အရသာက ပြင်းထန်ပြီး စိတ်ကျေနပ်စရာ အတွေ့အကြုံကို ပေးစွမ်းပါတယ်။ အရသာက ခံတွင်းထဲ စိမ့်ဝင်လွယ်တယ်။ ထို့အပြင်၊ ၎င်းတွင်ယခင်ကကျွန်တော်ကြိုးစားခဲ့ဖူးသော CBD တွန်းလှည်းများကဲ့သို့မနှစ်မြို့ဖွယ်ကောင်းသောအရသာမရှိပါ။
vape လှည်းကို အတုယူပါ။
ဖော်မြူလာသည် တက်ကြွသောခံစားချက်များကို ပေးစွမ်းရန်နှင့် နေ့တစ်နေ့ကို သိမ်းပိုက်ရန် သင့်အား ဆွဲဆောင်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ အရက်သောက်ပြီးနောက် သိမ်မွေ့သော စိတ်တည်ငြိမ်မှု နှင့် စွမ်းအင်တိုးလာမှုကို ခံစားခဲ့ရသည်။ ရလဒ်အနေနဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ နောက်ကြောင်းပြန်အစည်းအဝေးတွေကို အပြည့်အဝပြင်ဆင်နိုင်ခဲ့တယ်။
၎င်းကို ရက်သတ္တပတ်နှစ်ပတ်ကြာ နေ့စဉ်အသုံးပြုပြီးနောက်၊ ဤထုတ်ကုန်သည် သင့်အား စိတ်ဖိစီးမှုကို ပြေပျောက်စေပြီး ခွန်အားဖြစ်စေသည်ဟု ကျွန်ုပ်ပြောနိုင်ပါသည်။ ဒါကြောင့် တစ်နေ့တာလုံး ပိုအားဖြည့်ပေးဖို့ လိုအပ်ရင် ဒါက vape ပါ။
CBD Vape Pen Cartridge ကို ပြင်ဆင်ပါ။
အဆိုပါ ကျည်တောင့်ကို ပြုပြင်ပါ။ “သက်သာစေပြီး ပြုပြင်” ရန် ပုံဖော်ထားသည်။ လှည်းသည် ကျွန်ုပ်၏မျှော်လင့်ချက်အတိုင်း အသက်ရှင်မည်ကို သိလိုသည် ။ လေ့ကျင့်ခန်းမစခင်နဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းအပြီး နှစ်ပတ်အတွင်းမှာ နေ့တိုင်း စတင်အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ စဉ်ဆက်မပြတ်အသုံးပြုပြီးနောက် vape သည် ကျွန်ုပ်၏လေ့ကျင့်ခန်းပြီးနောက် ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာစေရန်အတွက် အလွန်ကောင်းမွန်သောဖြည့်စွက်ဆေးဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်ပြောနိုင်ပါသည်။ ၎င်းသည် ချက်ချင်းနီးပါး ပြေလျော့စေသည့် ခံစားချက်ကို ပေးစွမ်းပြီး နာကျင်မှုနှင့် ကြွက်သားများကို သက်သာစေသည်။
vape တွန်းလှည်းကို ပြင်ဆင်ပါ။
Vaping Mend သည် သင့်အား ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ၊ ထင်းရှူးပင်များနှင့် ချိုမြိန်သောကျောက်သီးများပေါင်းစပ်မှုသို့ ခေါ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်။ သင်၏ တင်းမာမှုနှင့် နာကျင်ကိုက်ခဲမှုများကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ခံစားရလိမ့်မည်။ အရသာက ချိုမြိန်ပေမဲ့ အရသာက ကြီးလွန်းတော့ ငါ့အတွက် အရမ်းအရေးကြီးတယ်။
ငြိမ်းချမ်းရေး CBD Vape Pen Cartridge
အဆိုပါ ငြိမ်းချမ်းရေး vape လှည်း စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို ပြေပျောက်စေပြီး စိတ်တည်ငြိမ်မှုကို ရရှိစေပါတယ်။ "နွေးထွေးသောပွေ့ဖက်မှု" အဖြစ် ဖော်ပြထားသော vape သည် ငရုတ်ကောင်း၊ စပျစ်သီးနှင့် သစ်သားမှတ်စုများဖြင့် အရသာရှိလှသည်။ အာခေါင်မှာ သိသိသာသာ ချောမွေ့နေပြီး လည်ချောင်းမှာ လုံးဝ မကြမ်းတမ်းပေမယ့်၊ ငါက သူ့ရဲ့ အရသာကို အကြီးမားဆုံး ပရိတ်သတ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဆိုလိုသည်မှာ၊ ကျွန်ုပ်သည် ၎င်းပေးဆောင်သော အကျိုးသက်ရောက်မှုများ၏ အမာခံပရိသတ်တစ်ဦးဖြစ်သည်။
ငြိမ်းချမ်းရေး vape လှည်း
လှည်းသည် ငြိမ်သက်ခြင်းနှင့် ငြိမ်သက်ခြင်းကို မြှင့်တင်ပေးသည်။ ကျွန်ုပ်၏ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့် နေ့ရက်တိုင်းအတွက် စိုးရိမ်ပူပန်မှုများအတွက် အလွန်အသုံးဝင်ကြောင်း သက်သေပြခဲ့သည်။ ခံစားချက်က သိမ်မွေ့ပြီး အလွန်သိမ်မွေ့တယ်။ အရေးကြီးဆုံးကတော့ ဒါဟာ သင့်ကို အိပ်ငိုက်စေတာမဟုတ်ဘဲ အာရုံစူးစိုက်မှုနဲ့ စိတ်ကို ကြည်လင်စေပါတယ်။
အဆိုပါ Zzz CBD vape ဘောပင်ကျည်တောင့် Amphora ရွေးချယ်မှုမှ ငါနောက်ဆုံးကြိုးစားခဲ့သည်။ မိုးရွာပြီးနောက် နှင်းဆီ၊ သံပုရာသီးနှင့် သစ်တောတို့၏ ရနံ့များ ထုပ်ပိုးထားသောကြောင့် ဤသည်မှာ ကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံး Amphora အရသာဖြစ်သည်။ ချိုမြိန်မှု အရိပ်အမြွက်မျှဖြင့် လတ်ဆတ်ပြီး အရသာရှိသည်။ အရသာက သဘာဝကျပြီး သိမ်မွေ့တယ်၊ ငါ့အိပ်ရာဝင်ချိန်တိုင်းအတွက် ပြီးပြည့်စုံတယ်။
Zzz vape လှည်း
အကျိုးသက်ရောက်မှုများသွားသည်နှင့်အမျှ၊ လှည်းသည် ထုပ်ပိုးမှုတွင် တောင်းဆိုထားသည့်အတိုင်း လုပ်ဆောင်သည်။ ကျွန်ုပ်တွင် ပြင်းထန်သော အိပ်မပျော်ခြင်း သို့မဟုတ် အိပ်ရေးပျက်ခြင်း မရှိသော်လည်း ညလယ်တွင် နိုးတတ်သည်။ ဒီတွန်းလှည်းကို ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကြာအောင် ငါစမ်းသပ်ခဲ့ပေမယ့် အဲဒါမဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ ထို့ကြောင့် အကျိုးသက်ရောက်မှု ချက်ခြင်းနီးနီးဖြစ်သဖြင့် ဤတွန်းလှည်းကို အသုံးမပြုမီ အိပ်ရာဝင်ရန် အကြံဉာဏ်တစ်ခု အပြည့်အဝ ပြင်ဆင်ထားရန် ဖြစ်ပါသည်။
လက်သမား Vape Pen စီးရီး (ကျောက်တုံး/သစ်သား)
vape တွန်းလှည်းများအပြင် Amphora က၎င်း၏ပေးပို့သည်။ Slate/Blackwood ရှိ Vape Pen မှ လက်သမားဆရာ. Vape Pen ကို အားပြန်သွင်းနိုင်သော၊ ဖြုတ်တပ်၍မရသော 300mAh လီသီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီဖြင့် Vessel သည် သစ်သားဒြပ်စင်များနှင့် anodized aluminium တို့ကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ထို့အပြင်၊ ၎င်းတွင်ဗို့အားဆက်တင်လေးခုနှင့်ဘက်ထရီသက်တမ်းကိုညွှန်ပြသော LED များပါရှိသည်။
Slate/Blackwood ရှိ Vape Pen မှ လက်သမားဆရာ
အစပိုင်းမှာတော့ သူ့ရဲ့ထူးခြားပြောင်မြောက်တဲ့ ဒီဇိုင်းကို စွဲစွဲလန်းလန်း စွဲလန်းမိနေပါပြီ။ အလွန်စတိုင်ကျသည်၊ ကျစ်လစ်ပြီး စစ်မှန်သည်။ ကျွန်တော်သုံးဖူးတဲ့ တခြားဖောင်တိန်တွေနဲ့ ယှဉ်ရင် အနည်းငယ် ပိုသိသာပေမယ့် သူ့ရဲ့ ကြံ့ခိုင်မှုကို နှစ်သက်ပါတယ်။ ၎င်းသည် ခိုင်ခံ့သောအလေးချိန်ရှိပြီး သင့်လက်ထဲတွင် အလွန်သင့်လျော်သည်။
ထို့အပြင်၊ သုတေသနအနည်းငယ်လုပ်ခဲ့ပြီး ဘောပင်သည် ကျည်တောင့်အများစု၏နေရာထိုင်ခင်းကို ခွင့်ပြုနိုင်သည့် ပြည့်စုံသောအကူးအပြောင်း module တစ်ခုပါရှိကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ထို့အပြင်၊ ၎င်းသည် 510 ချည်တွန်းလှည်းအများစုနှင့်ကိုက်ညီသည်။ ထို့အပြင် ဘောပင်သည် စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသော လေ၀င်လေထွက်ကို သေချာစေသည်။
ဘောပင်တွင် USB သံလိုက်အားသွင်းစနစ်ပါရှိသည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့၊ ဘက်ထရီက တာရှည်ခံပြီး စမ်းသပ်ကာလမှာ အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်ပေးတယ်လို့ ပြောရပါမယ်။
Amphora ထုတ်ကုန်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း- စီရင်ချက်
Amphora သည် မြင့်မားသော သန့်ရှင်းမှုနှင့် အရည်အသွေးကို ကတိပေးသော vape cartridge-focus အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည်။ ပထမဦးစွာ၊ ၎င်း၏ သီးခြား ပို့ဆောင်မှု ပက်ကေ့ချ် နှင့် ပေါ့ပါးပြီး စတိုင်ကျသော ထုတ်ကုန်ထုပ်ပိုးမှု ကြောင့် ကျွန်ုပ် သဘောကျခဲ့သည်။ သင်အသုံးပြုတော့မည့် ထုတ်ကုန်များသည် ဇိမ်ခံသည်ဟု ခံစားရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
နောက်တော့ လှည်းတိုင်းရဲ့ သဘာဝနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့အရသာကို သဘောကျတယ်လို့ ပြောရပါမယ်။ ကျွန်ုပ်သည် Peace vape cart အရသာ၏ အကြီးမားဆုံး အမာခံပရိတ်သတ်မဟုတ်သော်လည်း၊ တွန်းပို့သည့် တွန်းလှည်းအားလုံး၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုကို ကျွန်ုပ် အံ့သြမိပါသည်။ သူတို့ထဲက တစ်ယောက်ချင်းစီက ကျွန်တော့်ရဲ့မျှော်လင့်ချက်အတိုင်း အသက်ရှင်ပြီး ထုပ်ပိုးမှုမှာ ကတိပေးထားတဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကို ပေးစွမ်းပါတယ်။
ထို့အပြင်၊ Amphora အတွက် ကြီးမားသော အားသာချက်မှာ ၎င်း၏ထုတ်ကုန်များသည် သန့်စင်ပြီး အန္တရာယ်ရှိသော ပါဝင်ပစ္စည်းများ ကင်းစင်နေခြင်း ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် THC အခမဲ့ဖြစ်ပြီး vegan-ဖော်ရွေသည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ vape pen ရဲ့ ဒီဇိုင်းက သူ့ရဲ့ လေဝင်လေထွက်အတိုင်းပါပဲ။ အခြားဘောပင်များထက် အနည်းငယ်ပိုကြီးသော်လည်း Amphora မှ Craftsman Vape Pen သည် မယုံနိုင်လောက်အောင် ပြောင်မြောက်ပြီး စတိုင်ကျသည်။ ငါပြောရမယ်၊ အဲဒါက ငါ့ခရစ်စမတ်လက်ဆောင်စာရင်းထဲမှာ ပါပြီးသား။
အထူးသဖြင့်၊ သင်သည် CBD vaping ဝါသနာပါသူဖြစ်လျှင် Amphora သည် သင်ကြိုးစားရမည့်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
cbd vape တွန်းလှည်း
cbd vape ဖောင်တိန်
MS၊ Durham တက္ကသိုလ်
မိသားစုဆရာဝန်တစ်ဦး၏လုပ်ငန်းတွင် ကျယ်ပြန့်သော အသိပညာနှင့် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ထံမှ အသိပညာပေးမှု လိုအပ်သည့် ကျယ်ပြန့်သော ဆေးခန်းဆိုင်ရာ ကွဲပြားမှုများ ပါဝင်ပါသည်။ သို့သော်လည်း မိသားစုဆရာဝန်တစ်ယောက်အတွက် အရေးကြီးဆုံးအရာမှာ ဆရာဝန်နှင့် လူနာအကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် နားလည်မှုတို့ကြောင့် အောင်မြင်သော ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကို ရရှိစေရေးမှာ အရေးကြီးသည်ဟု ကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါသည်။ အားလပ်ရက်တွေမှာ သဘာဝအတိုင်း နေရတာကို နှစ်သက်တယ်။ ငယ်စဉ်ကတည်းက စစ်တုရင်နှင့် တင်းနစ်ကစားခြင်းကို ဝါသနာပါခဲ့သည်။ အားလပ်ချိန်တိုင်း ကမ္ဘာအနှံ့ ခရီးသွားရတာကို နှစ်သက်ပါတယ်။
KATS ရုက္ခဗေဒဆိုင်ရာ CBD ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်
BETA-ALANINE အတွက် GUIBE